आमा रत्नलाई भेट्न ज्ञानेन्द्र काडमाडौँ आउँदा पारश र हिमानी कता गायब? - Samaya Sandarva
आमा रत्नलाई भेट्न ज्ञानेन्द्र काडमाडौँ आउँदा पारश र हिमानी कता गायब?
शनिबार, फाल्गुन २५, २०७५ २१:२५ - समय सन्दर्भ
जीवनको उत्तरार्धमा रहेकी पूर्व मुमा बडामहारानी रत्न विरामी भएपछि मंगलबार (२१ फागुन) साँझ राजधानीको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भइन्। उनी अहिले पनि अस्पतालमा रहेर त्यही स्वास्थ्यलाभ गरिरहेकी छन्।
निर्मल निवास निकट स्रोतका अनुसार, रत्नलाई सम्भवत भोलि (२६ फागुन) अस्पतालले डिस्चार्ज गर्नेछ। आमा विरामी भएपछि विहीबार (२३ फागुन) मा अपरान्ह झापाबाट काठमाडौँ आइपुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भोलि नै फेरि झापा फर्कंदैछन्।
आमा विमारी भएर अस्पताल भर्ना भएको भोलिपल्टै पूर्वी तराई भ्रमणको कार्यक्रम सकेर काठमाडौँ आइपुगेका थिए, पूर्वराजा शाह। झापा फर्केलगत्तै पर्सिदेखि नै उनी पूर्वी तराईको भ्रमणलाई निरन्तरता दिने स्रोतले बतायो।
झापामा रहेका ज्ञानेन्द्र ९१ बर्षीया आमा विरामी भएर अस्पताल भर्ना गरिएको खबर पाएपछि काठमाडौँ आइपुगे। निर्मल निवासबाटै खानासहित आमालाई भेट्न थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल पुगे। र, त्यहाँ झण्डै तीन घण्टा बिताए।
ज्ञानेन्द्र ३ बर्षको छँदा आमा ईन्द्र राज्यलक्ष्मी शाहको निधन भएको थियो। ईन्द्र राज्यलक्ष्मीको निधनपछि उनैक बहिनी रत्नलाई तत्कालिन युवराज महेन्द्रले पत्नीको रुपमा भित्र्याएका थिए। त्यसपछि वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र लगायतको पालनपोषण रत्नकै हेरचाहमा भयो।
भनिन्छ कि, महेन्द्रका तीन छोरामध्ये रत्नबाट सबैभन्दा बढी मायाँ ज्ञानेन्द्रले नै पाउँथे। रत्न ज्ञानेन्द्रलाई जन्मदिने आमा त होइनन्। तर सबैभन्दा बढी मायाँ पाएकैले उनले आमा रत्नलाई दिनुपर्ने सम्मानमा ज्ञानेन्द्रले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्।
गणतन्त्र स्थापनापछि आफूले नारायणहिटी छाड्नु परेपनि रत्नको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको महेन्द्र मञ्जिल जीवन पर्यन्त आमा रत्नका लागि छाडिदिन तत्कालिन सरकारसँग उनले गरेको अनुरोधले पनि उनी आमा रत्नलाई कति सम्मान गर्दा रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
स्रोतका अनुसार, रत्नले जसरी राजा महेन्द्रका तीन भाई छोरामध्ये सबैभन्दा बढी मायाँ ज्ञानेन्द्रलाई गर्थिन्, आफ्ना तीन नातिहरु दीपेन्द्र, निराजन र पारशमध्ये उनको सबैभन्दा बढी मायाँ पारसले नै पाउँथे।
तर, झापामा रहेका बाबु सबै कार्यक्रम रद्द गरेर आमा भेट्न काठमाडौँ आउँदा आफूलाई सबैभन्दा बढी मायाँ गर्ने हजुरआमा रत्नलाई भेट्न नर्भिक पुगेको सार्वजनिक भएन, न त पारश पत्नी नै रत्नलाई भेट्न अस्पताल पुगिन्।
आखिर रत्न विरामी हुँदा पारश र हिमानी कता गायव भए? किन उनीहरु हजुरआमालाई भेट्न नर्भिक अस्पताल गएनन्?
पारश र हिमानी दुबै यतिबेला काठमाडौँमा छैनन्। कारण यही हो कि, ९१ बर्षीया हजुरआमा विरामी भएर अस्पताल भर्ना गरिँदा समेत उनीहरु उनको स्वास्थ्यलाभको कामना र स्याहार–सम्भारका लागि अस्पताल जान सकेनन्।
स्रोतका अनुसार, पूर्व युवराज पारश यतिबेला आफ्ना दौँतरीहरुका साथमा पूर्वी नेपालको भ्रमणतिर छन्। ‘उहाँ झापातिरै हुनुहुन्छ तर बुबा ज्ञानेन्द्र बस्दै आउनु भएको चियाबगानमा चाहिँ हुनुहुन्न’ स्रोतले भन्यो, ‘झापा–इलामतिरै उहाँ विन्दास पाराले घुमफिर गरिरहनु भएको छ।’
हिमानी चाहिँ केही दिन यता थाइल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककमा छिन्। त्यहीँ अध्ययन गरिरहेका छोरीहरु पूर्णिका र कृतिकाका लागि उनी त्यहाँ रहेकी हुन्। पछिल्लो समय काठमाडौँमा भन्दा छोरीहरुसँगै ब्याङ्ककमा धेरै बस्न थालेकी छन्।
आमा रत्न विमार नभएको भए पूर्व शाही परिवारलाई लिएर भारतको सिक्किम जाने तयारी तयारीमा पूर्वराजा थिए। २६ फागुनमा पूर्वी तराई भ्रमणको कार्यक्रम सकेर परिवारसहित सिक्किम प्रस्थान गर्ने उनको योजना थियो।